ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မော်လမြိုင် လူထုတွေ့ဆုံပွဲတွင် တိုင်ကြားစာ ၁၄၀ ကျော် လက်ခံထား၊ သမ္မတ လာရောက်စဉ်ကထက် နှစ်ဆနီးပါး ရှိ
Photo was proudly shared via Myanmar State Counsellor Office FB. Thank you to honor the original image.
မော်လမြိုင် ဧပြီ ၄
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့တွင် ယနေ့ ကျင်းပသည့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် လူထုတွေ့ဆုံပွဲ၌ ဖွင့်လှစ်ထားသော တိုင်ကြားစာ လက်ခံရေးဌာနထံ ပြည်သူများမှ ပေးပို့လာသော တိုင်ကြားစာ လက်ခံရရှိထားမှုအခြေအနေမှာ ၁၄၁ စောင် ရှိနေကြောင်း ကနဦး သိရသည်။
ဖော်ပြပါ အရေအတွက်ကို အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးထံမှ နံနက် ၁၁ နာရီခန့်တွင် သိရခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားကို မော်လမြိုင်ရှိ ပြည်နယ်ခန်းမတွင် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အခမ်းအနားစတင်၍ မိန့်ခွန်းပြောကြားချိန်အထိ တိုင်ကြားစာလက်ခံရရှိမှု အရေအတွက် ယင်းသို့ ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော လေးလခန့်၊ ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်က မော်လမြိုင်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာသော နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးဝင်းမြင့်ထံ ပြည်သူလူထုက ပေးပို့ခဲ့သည့် တိုင်ကြားစာ ၇၇ စောင် ရှိခဲ့ရာ အထက်ပါ အရေအတွက်ကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ ယနေ့ပေးပို့သည့် လူထုတိုင်ကြားစာ အရေအတွက်မှာ သမ္မတ လာရောက်စဉ်ကထက် နှစ်ဆနီးပါး ရှိနေသည်။
ယမန်နှစ်ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဒေသခံတို့ ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်း ဇွန် ၁၄ ရက်က မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ထားသည်။
(သတင်းအသေးစိတ်နှင့် အပြည့်အစုံ ဆက်လက် တင်ပြပါမည်။)
သတင်းအဖွဲ့ ၊ ဟင်္သာမီဒီယာ
ယခင်ဆောင်းပါးထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင် လေထုညစ်ညမ်းမှုအခြေအနေ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးမြင့်တက်လာ
နောက်ထပ်ဆောင်းပါးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခြင်း မပြုရန် AA ကို တောင်းဆို